Akụkọ - Oge Ihe Ngosi N'ịntanetị Na-abịa-Uwe Sourcing Paris / Sourcing At Magic Online
Corona virus na-agbanwe ọtụtụ ihe ngosi na ọrụ ịntanetị. Ihe anyị na-esonye na Septemba 2020 bụ 2 na-esonụ: Uwe Ntugharị Paris (Septemba 1,2020-February 28, 2020) na SOURCING na MAGIC Online (Septemba 15-December 15, 2020)
Uwe Sourcing Paris na Shawls & Scarves bụ azụmahịa mba ofesi maka ejiji nke Messe Frankfurt France (MFF) haziri. A ga-ejikọta ihe ngosi a na Avantex, Leatherworld, Texworld na Texworld Denim Paris, nke a na-eme ugboro abụọ n'afọ na ebe nlegharị anya nke Le Bourget ma dọta ọtụtụ puku ndị ọbịa ọkachamara si n'akụkụ ụwa niile.
SOURCING na anwansi n'ịntanetị na-enye ndị ọkachamara ịmụrụ ụtọ ohere ịbanye na mba ụwa guzobere nke ndị nrụpụta ụwa, ndị na-eweta ngwaahịa na ndị na-enye ọrụ, site na kọmputa. Ndị bịaranụ ga-enwe ike ịchọgharị n'ọma ahịa dijitalụ site na nhọrọ nhicha ọchụchọ dị iche iche na ikpo okwu dị mfe iji rụọ ọrụ nke eji eji ejiji na-enye ihe ntanetị na ngwa ahịa.
Nke a bụ oge nke abụọ anyị maka ịntanetị. Anyị na-ewulite ụlọ ngosi anyị n'ịntanetị site na isoro ndị otu anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ. A kagburu ọtụtụ ihe ngosi na-adịghị n'ịntanetị n'afọ a. Ihe ngosi ntanetị dị ka ụzọ ọhụrụ maka azụmaahịa na-anabata karịa nke mbụ. O yiri ka ọ ga - abụ ụzọ nkịtị maka azụmaahịa mba ụwa n'ọdịnihu. Ihe ngosi ntanetị abụọ a n'ịntanetị ga-adịru ọnwa 3-4. Anyị dị njikere na Welcome ka ase!